रोनाल्डोले रियल मड्रिड छाड्ने पक्का, युभेन्ट्सका अध्यक्षसँग सहमति ! – Nirantarkhabar
रोनाल्डोले रियल मड्रिड छाड्ने पक्का, युभेन्ट्सका अध्यक्षसँग सहमति !
ग्रिस: रियल मड्रिडका स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इटालियन च्याम्पिन युभेन्ट्स जाने करिब पक्का भएको छ । रियल मड्रिडमा रहँदा कर विवादमा मुछिएपछि रोनाल्डो यसै ट्रान्सफर विन्डोमा युभेन्ट्स जान लागेका हुन् ।
पाँच पटकका विश्व वर्ष खेलाडी रोनाल्डोका लागि युभेन्ट्सले ८८ मिलियन पाउन्ड खर्चने भएको छ। रियल मड्रिड पनि रोनाल्डोलार्इ यो रकममा बेच्न तयार भएपछि युभेन्ट्सका अध्यक्ष एन्ड्रिया एग्नेली मंगलबार इटालीबाट जहाजमा ग्रिसको कालामाटास्थित विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन् ।
उनी त्यहाँबाट रोनाल्डो बसेको होटेलसम्म हेलिकोप्टरमा चढेर पुगिसकेका छन् । युभेन्ट्स रोनाल्डोका लागि ८८ मिलियन पाउन्ड (११७ मिलियन डलर) खर्चिन तयार भएसँगै अध्यक्ष एन्ड्रिया एग्नेली ग्रिस पुगेका हुन् । त्यहाँ अध्यक्ष एन्ड्रिया र रोनाल्डोबीच ट्रान्सफबारे अन्तिम सहमति भएको गोल डटकमले जनाएको छ । अध्यक्ष एन्ड्रियाले ग्रिसमै रोनाल्डोसँग युभेन्ट्स सर्ने कुरालार्इ अन्तिम रूप दिनेछन् । रोनाल्डोले युभेन्ट्ससँग ५ वर्षको सम्झौता गर्ने भएका छन् । रोनाल्डो युभेन्ट्स जाने कुराको पक्का पक्की मंगलबार बिहान उनका एजेन्ट जोर्गे मेन्डेसले युभेन्ट्स रियल मड्रिडका अधिकारीसँग गरेका थिए ।
युभेन्ट्सका अध्यक्ष एन्ड्रिया सवार जहाज ग्रिसको कालामाटा विमानस्थलमा अवतरण भएको जहाजको भिडियो पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका छन् ।
रोनाल्डोले ९ सिजन स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडमा बिताएका छन् । उनी विश्वकीर्तिमानी ८० मिलियन पाउन्ड रकममा इङ्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट रियल मड्रिडमा पुगेका थिए । उनले रियल मड्रिडमा रहँदा कीर्तिमानी ४५१ गोल पनि गरेका छन् ।
पोर्चुगलका कप्तानसमेत रहेका रोनाल्डोले सान्टियागो बर्नाबाउमा रहँदा रियल मड्रिडलार्इ २ सिजन ला लिगा उपाधि, दुर्इवटा कोपा डेल रे र चारवटा च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जिताइसकेका छन् । स्कार्इ स्पोर्ट्सका स्पेनिस फुटबल विज्ञ ग्युइलेम बेलगले बताए अनुसार रियल मड्रिडले उनलार्इ बेच्न तयार भएपछि युरोपियन च्याम्पिन्सबाट युभेन्ट्समा सर्ने कुरामा उनी कन्भिन्स भएका थिए ।
रियल मड्रिडबाट युभेन्ट्स गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो
समर्थक र क्लबलाई धन्यवाद दिँदै रियल मड्रिडबाट विदा भए रोनाल्डो
पथरीमा प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता हुने